umbuzo 737 MAX
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #742 by jimidget
U-Boeing waphuma nje kunye ne-737-MAX esebenzisa iinjini ezifanayo njenge-787 ezonaqoqosho kakhulu ukuqhuba, ngoko ke unike i-aircraft ithuba elide. kukho nokuba kukho ezinye izinto kuzo andingenakuzi. ingaba kukho na ithuba lokuba esikhathini esizayo sinokukubona oku kulayishwe?
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #743 by Jamesman8
Kukho izinto ezininzi ezingalunganga kule post. Okokuqala, i-737MAX iye yajikeleza malunga nonyaka kunye nesiqingatha, kwaye ihamba ngokurhweba ukususela ngo-Meyi 2017 (i-Malindo Air). Okwesibini kubo bonke, HAHAHAHAHAHAHAHAHA. I-737MAX kunye ne-787 zisebenzisa iinjini ezifanayo? Ngaba uphakamileyo? iinjini ezisetyenziswe kwi-787 zilingana nobukhulu obufana ne-737 fuselage yonke. I-787 isebenzisa i-GE GEnx ne-Rolls Royce Trent 1000, okwangoku i-737 isebenzisa i-CFM LEAP-1B. Akukho ziguqulelo ezilungileyo zale nqwelo yeFSX / P3D ngaphandle kweTDS ngaphandle. I-PMDG ayizange ikhuphe igama kule nto njengenokwenzeka.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: Whitten
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #744 by jimidget
Wowu. UJamesman8 unesimo sengqondo. Ndingaze ndihlale ndikulungile, kodwa, ngeli xesha ndiza kusondela. Nantsi i-website ye-Boeing ye-tech specs kwi-series ye-MAX ye-737. Mhlawumbi umntu obaluleke kakhulu unokuphendula lo mbuzo:
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #745 by Jamesman8
Ukubhekisela ungenawo apho kufuphi kufuphi, basebenzisa ii-injini ezahlukeneyo, kwaye ndaphendula umbuzo wakho. I-TDS 737 MAX iyafumaneka kule website. Yiya ukuyikhuphela.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #746 by Gh0stRider203
Ndiya kunika ii options ze-TWO. 1) zihamba kunye kwaye zibe mnandi omnye komnye; okanye i-2) Ndiyifake le ntambo. Akukho khetho lwe-3rd.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #749 by Jamesman8
Ungayifaka, ndaphendula umbuzo wakhe. Andiyinto ekhohlakeleyo ndithetha nje iinyani ezichanileyo.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #751 by Dariussssss
Kungenxa yokuba le sihloko sonke senze ukuba ndihleke kangako ngaphambili, andiyi kucima ..... lol
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #764 by superskullmaster
Mhlawumbi kunguye mna kodwa ndivakalelwa kukuba umntu ocebileyo uyabuza, kufuneka uwanike yona. Sonke sinayo intanethi kunye ne-google, andiyikubona into ephosakeleyo ngendlela yokubuyiswa kweposi yangaphambili. Ngaba yayingumhle kakhulu.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #778 by Gh0stRider203
Ukuxubusha ukuze usebenze njengomzekelo wento ongayenzayo xa wenza isithuba (kunye nokuba (~ ukukhwehlela ~ "kungabi") ukuphendula kwizithuba ezinjalo).
Unyaka we-1 inyanga ye-1 edlulileyo #781 by julian1245
Abafana oko i-jimidget izama ukuthetha ukuba i-kinda ikopishe i-injini kwi-787 kwaye ibeka kwi-737 max kodwa iJames ilungile i-2 injini eyahlukeneyo kodwa i-jimgetget izama ukuthetha ukuba ibonakala ngathi injini enye kwaye vu melana.
Nceda ujonge abantu abanamanzi ngenxa yokuba ndiyazi ukuba bakule website
Ixesha ukwenza page: 0.159 imizuzwana